Namoota qoricha lafa qulqulleessu zoo keessatti biifaa jiran, suuraa miidiyaa Kooriyaa Kaabaatin Caamsaa 19, 20 gadhiifamee
Kooriyaan kaabaa namoonni mallattoo qaami isaanii hoo’u irratti argame miliyoona lama darbee ennaa jiru kanatti, weerara COVID-19 biyyattii keessatti ka’e jalqabaatti duuluuf ba’ii gaarii argamsiisuu isee beesistee jirti.
Weerarri COVID kan Kooriyaan kaabaa jalqabaaf torban darbe mirkaneessite, biyya moggaatti qoodamte keessatti meeshaalee wal’aansa fayyaa fi talaalliin hanqachuun yaaddoo uumee jira.
Kooriyaan kaabaaa diinawwan ishee kooriyaa kibbaa fi Yunaayitid Isteetis deggersa akka erganiif gaaffii dhiyaateef deebii hin kennine jechuu dhaan angawoonni kooriyaa kooriyaa kibbaa see’ool irraa beeksisaniiru.
Kooriyaan kaabaa namoonni 263,370 mallattoo qaammi ho’uu irratti argamuu isaaf namni itti dabalaa lama du’uu beeksistee jirti. Erga xumura baatii Eblaaa qabee namoonni miliyoonni 2.24 mallattoon qaama ho’uu irratti kan argame yoo ta’u namoonni 65 du’uu beeksistee jirti.